ဒီကနေ့မနက်အစောပိုင်းမှာ လက်ထိပ်ခတ်ခံရပြီး တရားရုံးကနေထွက်လာတဲ့ Seungriအကြောင်းကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်…. - Zeekwat Hot News
ဒီကနေ့မနက်အစောပိုင်းမှာ လက်ထိပ်ခတ်ခံရပြီး တရားရုံးကနေထွက်လာတဲ့ Seungriအကြောင်းကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်….
July 11, 20190353
ဒီကနေ့မနက်အစောပိုင်းမှာတော့ စစ်ဆေးမေးမြန်းမှုတွေ ခံဖို့အတွက် Seungri ဟာ Seocho မှာရှိတဲ့ ဆိုလ်းမြို့ တရားရုံးကို ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ ၃နာရီကြာ စစ်ဆေးမှုပြီးဆုံးသွားတဲ့နောက်မှာတော့ Seungri ဟာ လက်မောင်းကို ကြိုးနဲ့ ချည်ခံထားရတဲ့အပြင် လက်ထိပ်ခတ်လည်း ခံထားရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် တာဝန်ရှိသူနှစ်ဦးကလည်း သူ့ရဲ့ ဘေးကနေ တွဲပြီး ကားရှိတဲ့ နေရာကို လိုက်ပို့ပေးခဲ့ပါတယ်။
သတင်းတောက်တွေကတော့ သူရဲ့ ဘေးနားကို ချက်ခြင်းရောက်သွားခဲ့ပြီး တစ်ခုခုပြောဖို့အတွက် မိုက်တွေထိုးပေးကြပေမဲ့လည်း Seungri ကတော့ ဘာတစ်ခုမှမပြောပဲ တိတ်နေခဲ့ပါတယ်။ လက်ထိပ်ခတ်ခံထားရတဲ့ လက်ကို လူတွေမမြင်အောင် အဝတ်နဲ့ ပတ်ထားလေ့ရှိတဲ့ အလေ့ကြောင့် Seungri ရဲ့ လက်တွေကိုတော့ အဝတ်နဲ့ကာထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူရဲ့ လက်မောင်းမှာ ကြိုးချည်ထားတာတွေကိုလည်း သတင်းဓါတ်ပုံတွေမှာ ဝါးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပုံစံအတိုင်းဆိုရင်တော့ Seungri ကလည်း စစ်ဆေးမှုအပြီးမှာ လက်ထိပ်ခတ်ခံလိုက်ရတဲ့ Choi Jonghoon နဲ့ Jung Joon Youngတို့လို အခြေအနေမျိုးပဲဖြစ်တော့မယ်လို့ ထင်ရပါတယ်။
ဒီကနမေ့နကအြစောပိုငြးမှာတော့ စစဆြေးမေးမှနြးမှုတှေ ခံဖို့အတှကြ Seungri ဟာ Seocho မှာရှိတဲ့ ဆိုလြးမှို့ တရားရုံးကို ရောကလြာခဲ့ပါတယြ။ ၃နာရီကှာ စစဆြေးမှုပှီးဆုံးသှားတဲ့နောကမြှာတော့ Seungri ဟာ လကမြောငြးကို ကှိုးနဲ့ ခညွခြံထားရတဲ့အပှငြ လကထြိပခြတလြညြး ခံထားရပါတယြ။ ဒါ့အပှငြ တာဝနရြှိသူနှစြဦးကလညြး သူ့ရဲ့ ဘေးကနေ တှဲပှီး ကားရှိတဲ့ နရောကို လိုကပြို့ပေးခဲ့ပါတယြ။
သတငြးတောကတြှကတေော့ သူရဲ့ ဘေးနားကို ခကွခြှငြးရောကသြှားခဲ့ပှီး တစခြုခုပှောဖို့အတှကြ မိုကတြှထေိုးပေးကှပမေဲ့လညြး Seungri ကတော့ ဘာတစခြုမှမပှောပဲ တိတနြခေဲ့ပါတယြ။ လကထြိပခြတခြံထားရတဲ့ လကကြို လူတှမမှေငအြောငြ အဝတနြဲ့ ပတထြားလရှေိ့တဲ့ အလကှေ့ောငြ့ Seungri ရဲ့ လကတြှကေိုတော့ အဝတနြဲ့ကာထားတာဖှစပြါတယြ။ ဒါကှောငြ့ သူရဲ့ လကမြောငြးမှာ ကှိုးခညွထြားတာတှကေိုလညြး သတငြးဓါတပြုံတှမှော ဝါးထားတာဖှစပြါတယြ။ ဒီပုံစံအတိုငြးဆိုရငတြော့ Seungri ကလညြး စစဆြေးမှုအပှီးမှာ လကထြိပခြတခြံလိုကရြတဲ့ Choi Jonghoon နဲ့ Jung Joon Youngတို့လို အခှအနေမွေိုးပဲဖှစတြော့မယလြို့ ထငရြပါတယြ။
ရိုက်ကွင်းပေါ် က သူမရဲ့ အနုပညာလှုပ်ရှားမှု ပုံရိပ်လေး တွေကို မျှဝေပေးလိုက်တဲ့ မင်းသမီးချောလေး စိုးပြည့်သဇင်
မိုးဟေကိုရဲ့အနက်ရောင်ဖက်ရှင်နဲ့ ဆွဲဆောင်မှုရှိလွန်းပြီး လိုက်ဖက်နေလွန်းတဲ့ fashion ကို ပရိသတ်များက သဘောကျနေပြီ….